दशैंको रमझम शुरु | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / दशैंको रमझम शुरु
दशैंको रमझम शुरु
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड 17 days ago	0 47 Views
घोराही, नेपालीहरुको प्रमुख चाड दशैंको रमझम शुरु भएको छ। आज फूलपाती भित्र्याएसगै औपचारिकरुपमा दशैं शुरु भएको मानिन्छ। शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म नवरात्रको आराधना गरी दशौं दिन विहान टीका ग्रहण गर्ने गरिन्छ। दशैंका दिन मान्यजनहरुको हातबाट टीका ग्रहण गरे पनि सामान्यतः पूर्णिमासम्म टीका र प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ।
दशैंको टीकाको उत्तम साइत बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यस वर्षको दशैंको टीका असोज २१ गते मंगलवार परेको छ। नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले साइत नै खोजेर दशैंको टीका लगाउनेका लागि विजयादशमीको दिन बिहान १०ः३५ बजेको समय उत्तम रहेको बताउनुभयो। यद्यपि दशैंको टीकालाई देवी भगवतीको प्रसादको रुपमा लिइने हुदा दिनभरि पनि टीका लगाउन सकिने गौतमले बताउनुभयो।
दाङमा एक हजार प्रहरी परिचालन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दशंैलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सुरक्षा योजना निर्माण गरेको छ। दशैंका अवसरमा हुन सक्ने सम्भावित सवारी दुर्घटना, लुटपाट, यात्रुुमैत्री यातायात सेवामा असहजता, जुुवातास र झैझगडालाई लक्षित गर्दै सुरक्षा योजना निर्माण गरेको हो। जसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जिल्लाभर करीव एक हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।
चाडपर्वका नाममा मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले ट्राफिक सुरक्षा योजनालाई उच्च प्राथमिकता साथ लागुु गर्ने भएको छ। जसका लागि जिल्लाभर ५५ स्थानमा सवारी चेक प्वाइन्ट रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले जानकारी दिनुुभयो। त्यस्तै चाडपर्वमा हुुन सक्ने लुटपाटलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जिल्लाका चार स्थानलाई सुरक्षा योजनाको निगरानीमा राखेको छ। लमहीको मुुसोट, लमही– अमिलिया र धानखोला कालाकाटे सडक जंगली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा लुटपाट हुुन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको सुुुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको उहा“ले जानकारी दिनुुभयो। जसका लागि चौबिसै घण्टा २० मोबाइल टोलीको गस्ती जारी रहने बताएको छ।
त्यस्तै चाडपर्वमा दाङ भित्रिने र बाहिरिने यात्रुुहरुको सेवालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाका पाच स्थानमा यात्रुु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जानकारी दिनुुभयो। सहज यातायात सेवा र सम्भावित दुुर्घटनाबाट बचाउनका लागि घोराही, तुुलसीपुुर, लमही, भालुुबाङ र गढवामा यात्रुु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जानकारी दिनुुभयो।
चाडपर्वमा लाग्ने मेला तथा सांस्कृतिक सांगीतिक कार्यक्रममा मादकपदार्थ सेवन गरी झैझगडा हुुन सक्ने भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले साझ ९ बजे भन्दा पछाडि नाचगान गर्न नपाइने जनाएको छ। सम्भावित घटनाभएमा प्रहरीको सिधा सम्पर्क १०० मा फोन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै उपत्यका र सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत ४३ एसपी, १ सय २० डीएसपीसहित ४६ हजार ६ सय १९ जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले देशभर ९१ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेका छन्। प्रहरीले घर छोड्न लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न, सीसीटीभी चौबिसै घण्टा अन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, झ्यालढोका मिलेसम्म भित्रबाटै बन्द गर्न, साना ह्याम्मर छिराउने ठाउ“ नराख्न, मुख्य ढोकामा बलियो ताल्चा लगाउन, आफू घरमा नहुने सूचना छिमेकीलाई दिन, गरगहना, पैसा र बहुमूल्य सामान घरमा नराख्न र प्रहरीलाई आफू घरमा नहुने सूचना गोप्यरूपमा टिपाएर जान आग्रह गरेको छ।
झण्डै १८ लाखले छाडे काठमाडौं
दशैं मनाउन अधिकांश व्यक्ति र परिवार आ–आफ्नो घरतर्फ लागेका छन्। शुक्रवार साझसम्मझण्डै १८ लाखले राजधानी काठमाडौं छाडेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रवार सबैभन्दा धेरै तीन लाखले राजधानी छाडेको प्रहरीले जनाएको छ। राजधानी छाड्ने नागरिकको ट्राफिक ब्यवस्थापनका लागि मात्रै राजधानीमा एक हजारभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी खटाइएको थियो भने नागढुंगामा ¥याकरसहित ट्राफिक प्रहरी तैनाथ गरिएको छ।
इन्धन अभाव नहुने
नेपाल आयल निगमले दशैंका अवसरमा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको कुनै अभाव नहुने स्पष्ट पारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात नियमितरुपमा भइरहेको र सबै डिपोमा पर्याप्त मात्रामा इन्धन मौज्दात रहेको निगमले जनाएको छ। दशैंको बिदामा पनि इन्धनको अभाव हुन नदिन निगमले सार्वजनिक बिदा भए पनि डिपो आंशिक खुला राख्ने भएको छ। कुनै पनि पेट्रोल पम्पबाट इन्धनको माग आए तत्कालै ‘लोड’ गर्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ।
Previous: पोख्रेलको कविता संग्रह विमोचन
Next: दशैंमा खुुल्ने ढोका
सरकारले प्रतिफल देखाउनुपर्छः ज्ञवाली